दोब्बरले बढ्यो च्याङ्ग्राको मूल्य, कति पुग्यो ? - Nepalese Times
दोब्बरले बढ्यो च्याङ्ग्राको मूल्य, कति पुग्यो ?
नेप्लिज संवाददाता २७ आश्विन २०७८, बुधबार १४:३२ (1 हप्ता अघि) २०१ जनाले पढ़िसके
भक्तपुर। च्याङ्ग्राको मूल्य यस वर्ष अत्यधिक बढेको छ । दसैँको लागि मुस्ताङ हुँदै ल्याइएको च्याङ्ग्राको मूल्य यस वर्ष झण्डै दोब्बरले बढेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको १०८ रोपनी चौरमा दुई हजार ५०० च्याङ्ग्रा र करिब दुई हजार खसी बोका बिक्रीका लागि ल्याइएको छ ।
सोमबारदेखि खरीदका लागि ग्राहक आए पनि बुधबार बिहानैदेखि च्याङ्ग्रा, खसी, बोका खरिद गर्नका लागि ग्राहकको भीड लागेको छ ।
जिल्लाका मात्रै नभई काठमाडौं र काभे्रदेखिका बासिन्दा च्याङ्ग्रा लिन भक्तपुर आए पछि व्यापारीले प्रतिकिलो जिउँदो च्याङ्ग्रा रु एक हजार २०० मा बिक्री गरेका छन् ।
आजबाट भने अझै १०० रुपैयाँ बढ्न सक्ने व्यापारी बताउँछन् । यो मूल्य गत वर्षको भन्दा दोब्बर मूल्य हो । यहाँका व्यापारीले गत वर्ष जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु ७५० देखि रु ८०० सम्ममा बिक्री गरेकोमा यस वर्ष भने सुरुको मूल्य नै रु एक हजार २०० राखेका छन् ।
सल्लाघारी चौरमा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै उनले भने, ‘चीनबाट मुस्ताङसम्म ल्याइएको च्याङ्ग्रा नेपाली व्यापारीले मुस्ताङबाट खरिद गर्दा च्याङ्ग्रा प्रतिगोटा रु ४० हजार तिर्न परेकाले यस वर्ष च्याङ्ग्रा महँगो भएको हो ।
भेडा बिक्री हुन छाडे पछि यस वर्ष व्यापारीले काठमाडौं उपत्यकामै करिब ५० वटा मात्रै ल्याएको र भक्तपुरमा सात वटा मात्रै भेडा ल्याएको जानकारी दिए ।